Tavoahangy shampooing volo tsotra sy mety no malaza
Satria tsy mitombina ny famolavolana tavoahangin'ny rano shampooing, mitondrà olana vitsivitsy tsy ilaina izay miteraka fizotry ny fampiasana, tokony ho maromaro na latsaka no sendra vitsivitsy. Ny vokatra ampiasain'ny tavoahangin-shampooing mahazatra antsika amin'ny vatan'ny tavoahangy elliptika sy PE tsy mivoaka hanonitra ...
Ny orinasan-tavoahangy famonoana bibikely dia mila mifanaraka amin'ny endrika vaovao ihany koa
Ny fizotry ny fanavaozana ny fambolena dia miroso amin'ny fandrosoana tsy miato, ny tsenan'ny fambolena eto amintsika dia miroso amin'ny ambaratonga tsy misy fitsaharana, mekanisation ihany koa. Tamin'ny fidiran'ny matihanina amin'ny fambolena dia nanomboka niova ireo mpampiasa tavoahangy famonoana bibikely. Ilaina tokoa ny fanafody famonoana bibikely amin'ny vokatra fambolena. Alt ...
Mila mitandrina sy misoroka ny loza mety hitranga amin'ny indostrian'ny tavoahangy oliva
Taloha, ny menaka oliva, toy ny menaka azo hanina avo lenta, dia lafo vidy amin'ny fomba artifisialy, miaraka amin'ny tsy fahampian'ny fahalalana momba ny menaka oliva. Noho izany dia mpivarotra menaka oliva maro no manafatra menaka oliva lafo vidy avy any ivelany ary mividy menaka oliva anaty tavoahangy ao an-trano hahazoana tombony be. Tao anatin'izay ...
Tombontsoa amin'ny makiazy amin'ny fantsom-boanjo vermicelli
Vao tsy ela akory izay, tarehy makiazy maro no nanjary malaza ary ny "tsora-kazo" dia manana anarana tena lamaody. Ny tsena kosmetika izao, na inona na inona ambany mavokely, mena ny takolaka na aloky ny maso, maniry hiseho amin'ny endrika "kibay" fotsiny, dia afaka manainga ambony! Ka maninona ny vermicelli strip no manana powe toy izany ...
Fironana fampandrosoana tavoahangy plastika fanafody
Miaraka amin'ny tavoahangy plastika fanafody tsy miato dia hita ny fanontaniana amin'ny asa famonosana fanafody. Ataovy tratra ny tavoahangy plastika fitsaboana. Amin'ny alàlan'ny fanavaozana teknika mitohy sy ny fandrosoana, ny tavoahangy plastika ara-pahasalamana dia nanao fandrosoana lehibe tamin'ny packag ...
Ny orinasa Kechang dia mamakafaka ny firoboroboan'ny indostria fantsom-gel
Taizhou Kechang Plastic Industry Co., Ltd. dia matihanina mpanamboatra vokatra plastika, ao anatin'izany ny fantsom-panafody gynecological, mihoatra ny folo taona niainana ny famokarana, ny fikatsahana ny hatsarana, ny kalitao tsara sy ny kalitao no tanjon'ny serivisinay. Ny mpanaraka ...
Ny mahasamihafa ny tavoahangy plastika vita amin'ny akora samihafa
Mifampiraharaha amin'ny vokatra plastika isan'andro izahay, toy ny harona plastika entina mitondra zavatra, siny plastika fanariana fako, tavoahangy plastika hisotro rano mineraly sns. Fantatrao ve ny dikan'ny plastika PET. PP. PE? PET ...
Ny fiakaran'ny indostrian'ny plastika
Tamin'ny fivoaran'ny taona faramparany, ny indostrian'ny plastika ao Shina dia nisondrotra ary nanjary mpisolo toerana ny fonosana ivelany maro. Mihabetsaka ny fonosana ivelany novaina avy amin'ny tavoahangin-vera sy tavoahangy vita tamin'ny seramika ho fonosana tavoahangy plastika. Ny tavoahangy plastika koa tonga ao ...
Fironana fampandrosoana tavoahangy plastika
Satria mitohy mipoitra ireo tavoahangy fitaratra amin'ny olan'ny indostrian'ny fonosana. Eny, tratra ny tavoahangy plastika. Tavoahangy plastika amin'ny alàlan'ny fanavaozana teknika mitohy sy ny fandrosoana, farany manao tavoahangy plastika ao amin'ny indostrian'ny fonosana dia nahavita fandrosoana lehibe. Raha ny filazan'ireo manampahaizana manokana momba ny indostria, ...
Ny tavoahangy plastika fikarakarana ara-pahasalamana manan-tsaina dia ho firoboroboan'ny tavoahangy fitsaboana amin'ny ho avy
Amin'izao fotoana izao, na dia manana fahaiza-manao goavana aza ny tsenan'ny fonosana tavoahangy plastika, ny olana misy ao amin'ireo tavoahangy plastika misy ny vokatra ara-pahasalamana dia tsy azo odian-tsy hita. Tao anatin'izay taona lasa izay, ny indostrian'ny tavoahangy plastika misy ny vokatra ara-pahasalamana dia nivelatra ary nitombo hatrany ...
Ny endrika vaovao dia miditra amin'ny orinasan-tavoahangy famonoana bibikely
Ny tsenan'ny fambolena sinoa dia miroso mankany amin'ny ambaratonga sy ny mekanisialy, ary mandroso ihany koa ny fizotry ny fanavaozana ny fambolena. Tamin'ny fidiran'ny matihanina amin'ny fambolena dia nanomboka niova ireo mpampiasa tavoahangy famonoana bibikely. Ilaina tokoa ny famonoana bibikely ho an'ny mpamokatra ...